October 2, 2014 – democracy for burma
#ဒီ #Jack #Healey #ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်လစ်ဟာ မြန်မာဗုဒွဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ ထေရဝါဒ
On October 2, 2014 October 4, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ဒီ Jack Healey ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်လစ်ဟာ မြန်မာဗုဒွဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ ထေရဝါဒ ဗုဒွဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ သီရိလကာင်္နိုင်ငံကိုပါစော်ကားပြန်ပြီ။ ဒီတခါတကယ့်ကို မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ သီရိလကာင်္အစိုးရနဲ့ အတူ တရားစွဲသင့်ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမွာကြီးမှာ၊ စကြာင်္ဝဋ္ဌာတခုလုံးမှာ ရှာမှ ရှားတဲ့ အဖိုးတန် ထေရဝါဒ ဗုဒွဘာသာနိုင်ငံဖြစ်နေတာကို သူတို့အားလုံး မနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။ အလိုမရှိကြဖူး။ ဒီအမိမြန်မာနိုင်ငံကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပျက်စီးပျောက်ကွယ်စေချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်အခုလိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေ၊ စော်ကားနေကြတာဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ အမျိုးသားရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို အစွမ်းကုန်လုပ်နေတဲ့ ဆရာတော်ကြီး ဘဒွနွတ ဘိဝံသ ဝိစိတွသာရ (ဦးဝီရသူ) ကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့စော်ကားနေတာ သူတို့ အဲ့ဒီ ဘင်္ဂလီမဲမဲကုလားတွေကို ချစ်လွန်းလို့မဟုတ်ဖူး။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အဖိုးတန်မြန်မာပြည်ကြီးကို ပျက်စီးစေချင်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီကိစွကို ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်သင့်ပြီ။ ပေါ့ပေါ့ဆဆ မတွေးကြပါနဲ့တော့။ အားလုံးစုပေါင်းပြီး အမိမြေ၏ အနာဂါတ်ကို ကာကွယ်ပေးကြပါလို့ အလေးအနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ အမိမြေကို ပါးစပ်က ချစ်ရုံနဲ့ မရတော့ပါ။ စွမ်းစွမ်းတမံ ကာကွယ်ရမည့်အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ CR.Sandy ThinThin MarOo
On October 2, 2014 October 2, 2014 By Burma Myanmar newsIn Burma, ThailandLeaveacomment
After tense interrogation, 1 of3Myanmar workers confesses killing2British tourists; DNA test results to be known later today
2/10/2014 Three Myanmar construction workers were arrested by the police, one of them has confessed to the murder of the two British tourists. Pol Gen Jakthip Chichinda, deputy commissioner of the Royal Thai Police who was just appointed to head the investigation team, said one construction worker has confessed to the murder of the British tourists, David Miller and Ms Hannahb Witheridge, 23. But he said the police have yet to send DNA samples from the three Myanmar suspects for testing in Bangkok which will takeafew days to confirm if their DNA samples match the DNA collected from the body of the tourist, Ms Hannah. Pol Gen Jakthip did not elaborate if the two others have confessed or have connection on which part of the crime. But earlier the police team found them appearing in surveillance cameras near the scene and almost at the time when the murder took place. Commissioner of the Royal Thai Police Pol Gen Somyos Phumphanmuang will fly to Koh Tao tomorrow to question the three suspects by himself. PHOTOCREDIT TNEWS http://www.youtube.com/watch?v=C0_WDD2YJDY